Ogaden News Agency (ONA) – Goos Goos Wararka Ogadenya & Shirka Addis Ababa.
Goos Goos Wararka Ogadenya & Shirka Addis Ababa.
Posted by Dayr	/ August 24, 2018
Ergooyin aad u tiro badan oo ka kooban Madax-dhaqameed, Haween, Aqoonyahan, Siyaasiyiin iyo masuuliin kala duwan oo kamid ah Soomaalida Ogadenya ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa.
Ergooyinkan oo laga kala keenay dhamaan gobollada dalka Ogadenya uu ka kooban yahay ayaa maalmahan kusii qulqulayay Addis Ababa. Xogta ay heshay ONA ee arinkan ku saabsan ayaa sheegaysa in maanta oo Jumce ah uu Abiy Axmad la kulmi doono ergooyinka Soomaaliyeed ee la soo aruuriyay.
Ujeedada dhabta ah ee ka dambaysa kulankan maanta Addis Ababa ka dhacaya wali mahayno balse waxay ilo-wareedyo arintan u dhuun tuleela noo xaqiijiyeen in uu kulankan hordhac u yahay qorshaha dhabta ah ee Itoobiya ay la damacsan tahay inay ku maamusho dhulka soomaalida Ogadenya iyo in lagu xalaalaysto mashaariic badan oo la doonayo in laga fuliyo dhulka Soomaalida Ogadenya si loo yidhaahdo waxaan kala tashanay madax-dhameedkii iyo qaybihii kala duwanaa ee shacabka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale xaalada guud ee Itoobiya ayaa meel halis ah maraysa. Dalka oo idil waxaa ha dheeyay khilaafaad iyo colaado u dhexeeya Qawmiyadaha kala duwan ee dalka ku nool. waxaa kale oo sii xoogaysanaya amni darrida ka jirta caasimada Itoobiya ee Addis Ababa taasi oo khubarada arimaha Itoobiya falanqeeya ay ku macneeyeen in ay lamid tahay xaalada Itoobiya dhimbil korka dambas ku leh balse hoosta ka huraysa taas oo mar uun qarxi doonta.